Fikarohana vaovao no manazava azy: ny logo minimalista tsy mivarotra | Famoronana an-tserasera
Raha toa ianao ka hanao logo minimalist ho an'ny mpanjifa na ny orinasanao dia ovao ny sainao
Toa inona ny fanangonana fanadihadiana vaovao izany rehetra izany logo minimalist rehetra izay namolavola, dia tsy nisy dikany. Toa izany tena tsy manao izany vokatra tiana izany amin'ny mpanjifa na mpanjifa, fa ny mifanohitra amin'izay dia mampihemotra azy ireo.
Ny tiako holazaina dia inona eritrereto ny famoronana sary famantarana manazava Raha tokony ho ireo minimalism izay, raha ny fahitan'ny mpamolavola azy, dia tsara lavitra noho izany, fa ho an'ireo izay hangataka serivisy na hividy zavatra na zavatra ilain'ny mpanjifa, na fu na fa, araka ny lazain'ny olona.
Ity fandalinana farany ity dia mitazona izany ny mpividy dia aleony sary famantarana noho ireo logo minimalista izay efa fironana. Ary io dia taloha ela be, ireo logo minimalista ireo dia fandresena azo araky ny filazan'ny manam-pahaizana, na dia ny logo famaritana aza no mitondra ny sambo mankany amin'ny rano isaky ny sokajy.
Ny fandinihana ihany, navoaka tao amin'ny Journal of Marketing Reasearch, dia miorina amin'ny zava-misy ny sary famaritana dia mahomby kokoa amin'ny famoronana "fahatokisana". Ny fikarohana nataon'ny profesora avy any Kanada, Angletera ary France dia nanadihady logo miisa 597 izay, niaraka tamin'ny fanampian'ny mpandray anjara 2.000, dia nahatonga azy ireo hahita fa ny famaritana ny sary famantarana iray dia ny vokany tsara kokoa amin'ny fanontana. ary, noho izany, fikasana hividy.
Izay no tena tadiavinao, satria mitranga amin'ireo teny lakile ireo izay manome torolàlana amin'ny pejin-tsambo. Mpandray anjara amin'ny fianarana nahazo famaritana avy amin'ny orinasa isan-karazany hitsaran'izy ireo ny maha-azo itokiana ny logo. Faritana farany fa misy fiarahana miabo tena lehibe eo amin'ny famaritana ny sary famantarana sy ny tombom-barotra lehibe.
Azontsika atao ny miresaka ohatra iray: minimalism amin'ny sary famantarana Slack vaovao. SAINGY misy logo maro hafa misintona very ny varotra irery. Ireo an'ny Citroën, Mastercard, Mitsubishi Motors ary maro hafa. Mazava ho azy, tadidio fa rehefa lehibe ny orinasa dia afaka manalavitra ny fananana sary famaritana izy io ary miorina amin'ny minimalist, toy ny "M" ho an'ny McDonalds sy izay hitantsika tamin'ny tranga nifandimby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Raha toa ianao ka hanao logo minimalist ho an'ny mpanjifa na ny orinasanao dia ovao ny sainao
Ahoana ny fomba handaminana ny tambajotra sosialy